Radanoara Julien: “Hafatry ny Papa ny hanovana ny fanaovana politika eto” | NewsMada
Radanoara Julien: “Hafatry ny Papa ny hanovana ny fanaovana politika eto”
Inona ny akon’ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa Fransoa teto Madagasikara eo amin’ny lafiny politika? Maneho ny fijeriny ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien: “Hafatra ho an’ny mpanao politika ny hoe: tokony hisy fiezahana be dia be amin’ny hanovana ny fanaovana politika. Izany hoe, hiverina any amin’ilay tany am-boalohany.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ahoana ny fahitanao iny fitsidihan’ny Papa Fransoa teto Madagasikara iny?
Radanoara Julien (-): Misy lafiny telo ny fitsidihan’ny Papa: ny ara-panahy, ny lafiny politika, ary ny lafiny maha olona. Ny lafiny fanahy, fampirisihana sy fanomezana hery ho an’ny mpino katolika eto amintsika ny fijoroana sy ny fahatongavany, fampirisihana koa ho an’ny pretra sy ny relijiozy hanao bebe kokoa sy hiroso amin’ny lalina amin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly. Manana fahalalana momba izany eto amintsika indrindra koa izy, efa be dia be ny fiangonana zandriny. Matetika, lasa any avokoa ny mpino amin’ny fiangonana zokiny. Toy ny hoe mila havaozina sy omena hery izany ny fiangonana katolika eto Madagasikara.
* Ary ny eo amin’ny lafiny politika?
– Eo ny ady amin’ny kolikoly, ny hisian’ny fitoniana eto amin’ny firenena, ny fihavanana… Tokony hezahina izany ny fametrahana ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny soa iombonana. Misy dikany ilay fanehoana lehibe ny fitsidihana ny Akamasoa teny amin’ny pretra Pedro. Nasehony ny ireo olona sahirana sy nailika, nefa mahavita zavatra eto. Ahoana no tsy ahavitana an’izany rehefa misy ezaka? Ampiasaina ho an’ny soa iombonana ny fahefana fa tsy ho an’ny tsirairay avy izany, indrindra ho an’ny mpitondra.
Hafatra ho an’ny mpanao politika koa ny hoe tokony hisy fiezahana be dia be amin’ny hanovana ny fanaovana politika: hiverina any amin’ilay tany am-boalohany. Politika tsara io ataon’ny pretra Pedro io: mitady ny soa iombonana; faharoa, manatsara ny fiainan’ny vahoaka; fahatelo, ny hisian’ny fampandrosoana na ny ezaka ho amin’ny fampandrosoana ny tsirairay.
* Ahoana ny lafiny maha olona?
– Ny zon’olombelona no napetrany: ahoana ny momba ny trano, ohatra, ny fanabeazana, ny fahasalamana… ? Eo koa ny ady amin’ny fahantrana. Fantany fa tany an-dalam-pandrosoana isika. Tokony hojerena bebe kokoa ny olona tena mahantra fa lasa voalikilika. Izay no ampifandraisina amin’ny fitsidihana tany amin’ny pretra Pedro hoe: ireo voailikilika nefa mahavita rehefa manao zavatra ary misy ny finiavana.
* Ahoana kosa ny lafiny diplaomasia eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena?
– Eo amin’ny politika iraisam-pirenena, midika fa hoe demokratika ny fitondrana eto Madagasikara ny fijoroan’ny Papa teto, taorian’ny hoe fifidianana demokratika. Mitondra soa be dia be ho an’i Madagasikara izay.
Voalohany, nampahafantatra an’i Madagasikara eran’izao tontolo izao izy. Dokambarotra maimaimpoana ny nataony momba ny fahatongavany teto. Niteny an’iny fitsidihana iny ny fampahalalam-baovao eran-tany, niresaka momba an’i Madagasikara: ny fizahantany, ny fampiasam-bola eto amintsika…
Ankoatra izany, tsy fantatra izay resaka tany: mety eo ny lafiny toekarena. Manampahefana moraly ny Papa, eran’izao tontolo izao fa tsy eto Madagasikara irery. Midika izany fa hoe azo atao tsara ny mifampiraharaha ara-barotra amin’i Madagasikara. Aza hadinoina, ohatra, fa any Vatican ny ozinina Fiat. Azo atao koa ny famindrana haitao, indrindra mamokatra fiara isika: ny Karenjy.
Ny mahagaga, tsy manao dokambarotra Karenjy isika nefa mamokatra izany. Ny tokony ho izy aza, fiara Karenjy no hatao ho an’ny mpitondra fanjakana rehetra. Ny any Frantsa, ohatra: tsy mividy fiara Toyota na ny toy izany ho an’ny mpitondra fanjakana fa Peugeot, Renault, Citroën. Koa nahoana no manao valalan’amboa ka isika indray no tsy tia azy?
* Ny hamaranana izao dinika izao?
– Farany, lafiny politika ihany: tsy niteny frantsay ny Papa raha tsy tany amin’ny farany. Iny farany iny aza, nataony teny malagasy raha nahay izy. Nampiasa ny teniny izy, nampitodika antsika hoe: mba tazonina ny maha ianao anao, asio hasiny ny soatoavin’ny tena… mba hahazoanao mivelatra. Hafatra avokoa ange izany.
Tsara amin’ny ankapobeny ny nahatongavan’ny Papa. Mitovy amin’ireny tamin’ny Barea ireny… Mba hisy fientanana ny vahoaka malagasy, hisy firaisankina sy firaisam-po. Ho hita eo ny firotsahan’ny fanjakana. Efa misy ny finiavana politika ombieny ombieny fa atao mivaingana amin’ny zavatra vita: ho azo antoka ny fe-potoam-piasana faharoa.
Andrasana izany izao ny asa mivaingana na eo amin’ny fiangonana na ny kristianina na ny tanora katolika, indrindra eo amin’ny fitondram-panjakana… mba hijery ny madinika. Mba hisy fitoniana eo amin’ny vahoaka, firaisankina sy fiaraha-mientana ho amin’ny fampandrosoana fa tsy mifanilikilika.